Tapany | NewsMada
Nanao be midina nijery ireo taksibe mbola nanao saran-dàlana 500ariary omaly ny teo anivon’ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety. Fampiharana ilay baiko tapaka tamin’ny filan-kevitry ny governemanta no nampiharina tamin’ity omaly ity. Raha tahaka izao no nanaovana ilay baiko nomen’ny praiminisitra mikasika ny fanafoanana ny fahatapahan-jiro dia efa tsy nisy intsony izany amin’izao fotoana izao.
Tovolahy iray, manodidina ny 20 taona, no maty tsy tra-drano tetsy Ankorahotra omaly maraina, tokony ho tamin’ny 10 ora maraina tany ho any. Araka ny fatatra dia nandeha môtô ity tovolahy ity ka nidona tamin’ny fiara iray izy ary nianjera ka notetezin’ny fiara iray avy eo ny vatany. Nanao fizahana ity loza nahatsiravina ity avy eo ny teo anivon’ny polisy misahana ny fifamoivoizana. Efa misokatra araka izany ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity amin’izao fotoana izao.
Niveri-maina avokoa tamin’ny omaly ireo olona nanana raharaham-pitsarana teny amin’ny tribonaly Anosy. Araka ny fantatra, noho ny fisian’ny fifampiarabana nahatratra ny taona 2017 izay nataon’ny mpiasan’ny fitsarana no nahatonga ny raharaham-pitsarana rehetra tokony nandeha omaly naverina avokoa. Marobe ireo olona nimenomenona manoloana ity tsy fisian’ny raharaham-pitsarana ity satria tsy nisy fampahafantarana mialoha akory izany.